U-Andile KaMajola uzoshaya izinyoni ezimbili ngelilodwa | Isolezwe
U-Andile KaMajola uzoshaya izinyoni ezimbili ngelilodwa
Isolezwe / 7 June 2012, 1:33pm /
U-ANDILE KaMajola ozobe eqopha iDVD yezingoma zakhe zakudala nezintsha e-ICC
ISIHLABANI somculo wokholo sizoba nendumezulu yomcimbi wokuqopha iDVD yezingoma ezikuma-albhamu aso amadala kanjalo nezitholakala ocwecweni lwaso lwakamuva.
UMfundisi Andile KaMajola ozobe eqopha le DVD equkethe amanoni ezingoma zakhe aduma ngazo okuba-lwa kuzo ethi Subscriber, Gingqikela Kuyo, Ucu nezinye. Uthe ziningi izinto ezizobe zenzeka kulo mcimbi ozokuba se-ICC yaseThekwini ngoJuni 30.
“Yize ngizobe ngijabulisa abalande-li bami kulo mcimbi wokuqoshwa kwe-DVD yezingoma zami zonke esengike ngazicula nezingakadumi, ngizophinde ngethule ngokusemthethweni inhlangano yami ebizwa ngokuthi yiSibathoba Amanxeba. Le nhlangano engisanda kuyisungula ibhekelela izintandane nemindeni ehlwempu eshonelwe ngabantu abasuke beyondla,” kuchaza lo mculi.
Eqhuba uthe uMnyango wezokuThutha ngeke usale kulo mcimbi njengoba esebenzisana nawo kule nhlangano yakhe ezokwethulwa ngokusemthweni ngalolu suku.
“Sizodumisa sibonge uNkulunkulu ngothando lwakhe oluyisimanga kulo mcimbi. Abantu asebeqala ukulahlekelwa yithemba bazohamba isiguqukile imiqondo yabo njengoba bezonikwa isibindi sokubhekana nezimo ezingezinhle empilweni,” kusho uKaMajola.
Lo mculi osekhiphe ama-albhamu amathathu okubalwa kuwo ethi Uthando LukaBaba, yango-2001, African Unity, yango-2004 ayiqopha ngaphansi kwesitebela sakhe i-Elinda Productions, nethi Andile KaMajola Live in Durban ngo-2007. Usekhiphe nenye entsha ebizwa ngokuthi Ngiyindoda enezingoma ezingu-16, okubalwa kuzo ethi I Wonder Why, Kukhona Isikhathi Esifikayo nethi Umuntu Utalagu yona ayicula ngokuhlanganyela nomculi kamaskandi uThokozani Langa.
Uthe kulo mcimbi uyobe engahambi yedwa njengoba eyodedela abaculi abafana noSolly Mahlangu, Hlengiwe Mhlaba, Thokozani Langa, nabanye emuva kokunandisa kwakhe esitaji.
Amathikithi okungena kulo mcimbi atholakala kumaComputicket ngo-R100 kuya ku-R200.